स्वस्तिमा खड्काले किनिन् नयाँ कार, कडा परिश्रम गरेर किनेको भन्दै मख्ख ! - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा स्वस्तिमा खड्काले किनिन् नयाँ कार, कडा परिश्रम गरेर किनेको भन्दै मख्ख !
चाखलाग्दो कुरा admin June 29, 20210Comment
लकडाउन र को,रोना महामारीको बिचमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले कार किनेको छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गर्दै उक्त्त कुरा बताएकी हुन् । कुन कम्पनीको कार कतिमा किनेको भनेर केही नखुलाएपनि उनले आफु अत्यन्तै हर्षित भएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘हामी असामान्य परिस्थितिमा छौं । यस्तो बेला सरकारको प्राथमिकतामा फिल्म उद्योग पर्न सकेको छैन’ उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘को,रोनाको मारमा सबैभन्दा बढी मारमा फिल्ममा काम गर्ने प्राविधिकहरू परेका छन् ।’ दैनिक छाक टार्न समेत प्राविधिकहरुको समस्या रहेको समाचारले आफुलाई भाबुक समेत बनाएको बताएकी छन् ।
आफ्नो चिनजानका व्यक्ति र आफू आबद्ध ब्रान्डहरुलाई समेत प्राविधिकको सहयोगका लागि आफुले आग्रह गरेको बताएकी खड्काले फिल्म प्राविधिकको काम र पारिश्रमिकको बिषयमा समेत चर्चा गरेकी छन् । ‘
लकडाउनको समयसम्म सजिलो बनाउन सके प्राविधिकहरूका लागि ठूलो राहत हुने थियो’ उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘यो समयमा सहयोग माग्न आफूलाई एकदमै अप्ठेरो लागेको छ । सक्नेले सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु